Xaniid - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani waa maqaal ku saabsan nooc ka mid ah cuntada. Qoraalo kale fiiri waslad
Hilib waslad xaniid ah
Xaniid (Af-Ingiriis: beefsteak; Af-Carabi: ستيك) waa hilibka waslada marka lagu shiilo dab kali ah. Sidoo kale xaniidku waa nooc ka mid ah hilibka xoolaha, gaar ahaan hilibka laga jaro garabka, jeeniga, lugta, dhabarka iyo meelaha leh jiidh saafi ah. Sidoo kale wasladu waa hilibka laga gooyo muruqa xoolaha kaasi oo leh waxyar oo baruur ah, laakiin inta badan jiidh saafi ah. Waslada waxaa laga diyaariyaa hilibka lo'da, geela, adhiga iyo doofaarka. Hilibka kaluunka iyo digaaga iyo shimbiraha laga sameeyn karo waslada.
Si la mid ah shacabka caalamka, bulshada Soomaalidu waxay isticmaalaan noocyada kala duwan ee waslada xaniidka, gaar ahaan wakhtiyada arooska, xaflada, dabaaldegyada, ciidaha iyo maalmaha la baashaalayo. Inta ugu badan waxaa lagu darsadaa cuntooyinka wakhtiga quraaca, qadada iyo cashada, laakiin wakhtiyadu intaas kuma koobna. Noocyada wasladu ee deegaanada Soomaalida ku caanka ah waxaa ka mid ah xaniidka iyo waslada cad. Dadka Soomaalidu waxay waslada ku diyaariyaan hilib, khudaar, milix, saliid, biyo iyo xawaash kuwaasi oo si xirfad leh loo karkariyo ilaa ay gaadho heer nooca loogu talogalay ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xaniid&oldid=187594"